Havatsa-Upem : notolorana salotrahasina i Soatiana Andriana | NewsMada
Havatsa-Upem : notolorana salotrahasina i Soatiana Andriana
Notanterahina ny alakamisy 2 novambra teo tany Frantsa, ny lanonana. Nametraka ny sanganasany vitsivitsy tao amin’ny Havatsa-Upem i Soatiana Andriana, ny taona 2014. Taona 2017, telo taona nandalovany sedra… Nasalotra ity mpanoratra ity tamin’ny fomba ofisialy ny salotrahasina maneho fa anisan’ireo mpikambana ao anatin’ny fikambanana izy nanomboka tamin’io andro io. Nandritra ny lanonam-panokafana ny fankalazana ny faha-65 taon’ny Havatsa-Upem, ny alakamisy teo, no nanatanterahan-dRtoa Andrianasolo Hajaina ny fametrahana ny salotrahasina an’i Soatiana Andriana.
… Nambarany tamin’izany fa : « Manamafy ny fanekeko sy ny toky nomeko ny hanaja sy hizara ary hanatevin-daharana amin’ ny fikolokoloana, ny fivoizana ary ny fampandrosoana ny teny sy ny maha Malagasy ny tenako ary manentana antsika tanora ihany koa hanandratra izany teny sy ny maha Malagasy antsika izany ».
Nomarihin’i Soatiana Andriana ihany koa fa anisan’ny nampitsiry sy nampiredareda ny fitiavany ny teny sy ny literatiora malagasy ny fananany reny mpampianatra teny malagasy nandritra ny 40 taona. « Isaorako manokana ny reniko », hoy i Soatiana Andrianina.